Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Januvia® (ဂျန်နူဗီရား)
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ကဘာလဲ။
Generic Name: Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သင့်တင့်တဲ့အာဟာရ၊ အားကစားအစီအစဉ်နဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များနေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အခြားဆေးတွေနဲ့အတူတွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များနေခြင်းကို စီမံကုသခြင်းက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ မျက်လုံးကန်းခြင်း၊ အာရုံကြောပြဿနာများ၊ ခြေလက်များဆုံးရှူံးခြင်းနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆီးချိုဆိုင်ရာကီတုန်းအက်ဆစ်ဓါတ်များခြင်း သို့ Januvia® (sitagliptin)နဲ့ဓါတ်မတည့်ဘူးဆိုရင် အသုံးမပြုသ်င့်ပါဘူး။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သို့ ဆေးညွှန်းစာအတိုင်း အစာနဲ့တွဲပြီး သို့ အစာမပါဘဲ တိတိကျကျသောက်သင့်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို အချိန်တိုင်းစစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ အခြားသွေးစစ်ဆေးခြင်းတွေလည်း ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓတ်နည်းသွားခြင်းက ဆီးချိုရောဂါသည်တွေတိုင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်ဆာခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အရေပြားဖျော့တော့ခြင်း၊ ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ရခက်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နည်းချိန်တိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ သင်နဲ့အတူသကြားဓါတ်ကို အမြဲဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ သင့်မှာပြင်းထန်တဲ့သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကျခြင်း၊ အစားမစားနိုင်ခြင်းမသောက်နိုင်ခြင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဂလူကာဂွန်ထိုးဆေးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ရေငတ်ခြင်း၊ဆီးသွားများခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊ ထွက်သက်သစ်သီးနံ့ရခြင်း၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားခြောက်ခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းစတဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များခြင်းလက္ခဏာတွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေသင့်ပါတယ်။
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Januvia® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဆီးချိုဆိုင်ရာကီတုန်းအက်ဆစ်ဓါတ်များခြင်းအခြေအနေရှိနေရင် (သင့်ဆရာဝန်ကို အင်ဆူလင်သုံးကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်မှုများ ( အဖုအပိမ့်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလျှာရောင်ခြင်း၊)တွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အကူအညီယူသင့်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ပိုင်းအောင့်ခြင်း၊ ကျောဘက်ထိပျံ့သွားခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစားစားလိုစိတ်မရှိခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းကဲ့သို့သော ပန်ကရိယရောင်ခြင်းလက္ခဏာတွေ တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးရပ်လိုက်ပြီးဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ခုခံအားခန္ဓါကိုယ်အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း- ယားယံခြင်း၊ အရေပြားအပေါ်လွှာပေါက်ပြဲခြင်း
ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့အရေပြားဓါတ်မတည့်မှုများ- ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာလျှာရောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးပူခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်း၊ အနီရောင်အပြာရောင်အဖုများပျံ့သွားခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာနဲ့ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွေမှာ) ပေါက်ပြဲခြင်း၊ အရေပြားကွာကျခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကျောနာခြင်း၊ အဆစ်ကြွက်သားနာခြင်း
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
အပြန်အလှန်သက်ရာက်မှုတွေကြောင့် ဆေးအာနိသင်ပြောင်းသွားတာတွေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုများလာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆေးအသုံးမပြုခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးုဆက်တွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေမှာ အရက်က သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာကြောင့် အရက်ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နည်းသွားခြင်း ၊များသွားခြင်းတွေ သင်သောက်လိုက်တဲ့မာဏပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်သွားန်ုငိပါတယ်။
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
50 mL/minသို့ အထက် Creatinine ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ အမျိုးသားများမှာ သွေးတွင်း creatinine1.7 mg/Dlသို့ အောက်၊ အမျိုးသမ်ီးများတွင် 1.5 mg/Dlသို့ အောက်) Januvia®ဆေးပမာဏအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
( Creatinine ဖယ်ထုတ်ခြင်း 30နဲ့ 30အထက်၊ 50 mL/minအောက်၊ အမျိုးသားများသွေးတွင်း creatinine
1.7အထက်ကနေ 3.0 mg/dlနဲ့အောက်၊ အမျိုးသမီးများသွေးတွင်း creatinine1.5အထက် သို့ 2.5 mg/dlနဲ့အောက်) ၊ဆေးပမာဏကို 50 mgတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(Creatinine ဖယ်ထုတ်ခြင်းပမာဏ 30 mL/minအောက်၊ အမျိုးသားများ3.0 mg/dlအထက်သွေးတွင်း Creatinineပမာဏ ၊ အမျိုးသမ်းများ2.5 mg/dlအထက်၊)၊ သွေးသန့်စင်ခြင်း၊ ကလီစာများအုပ်ထားသည့်အမြှေးအတွင်း အရည်များသန့်စင်လှဲလှယ်ခြင်းတွေလိုအပ်တဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက် 25 mgတစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊ ဆေးအသုံးပြုခြင်းအတွက် သန့်စင်လှဲလှယ်ခြင်းအချိန်ပေါ်မူမတည်ပါဘူး။
ကလေးလူနာတွေအတွက် ဆေးပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဆေးအသုံးမပြုခင်မှာ ဆေးရဲ့စိတ်ချရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အဝနားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပိုသိလိုတာတွေအတွက် သင့်ဆရာဝန်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Januvia® (ဂျန်နူဗီရား) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား၊ ဖလင်အုပ်ထားသောဆေးပြားပုံစံ- sitagliptin phosphate 25mg
Januvia. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-145704/januvia-oral/details#interactions. Accessed July 25, 2017
Januvia. https://www.drugs.com/januvia.html. Accessed July 25, 2017